Kusvira vakadzi ku UK part 2 – VanodaZvinhu
Continuation from part one, click here to go back to part one
Zvino mazuva akafamba uku mbutu ndichingova. Nekuda kwaiita Sidell kukwirwa neni akazosuggester kuti ndigare naye, izvi chaingove chirango kutaura sezvo ndakanga ndichitogara ikoko. Staying together would help me save some money for my family. Takatanga kugara tose ndikadzidziswa zvose zvionita kuti mukadzi anakirwe, uye ndayamwa mboro ndikanzwa kuzipa kwazvo, asi pese pandaimukwira aitozhamba chete. Mumwe musi Sidell was off then Tracy told me kuti asiyana ne boy friend yake, saka she was stressed. ini ndakangomunzwirwo tsitsi ndikati dont wory you are beautiful you will get another one soon, apa ndakagomukwidzawo ndege yemapepa nokuti aiva asina kunaka zvake. Zvino akafunga kuti zvandati akanaka ndakumuda, izvo kwete, akakumbira kuperekedzwa kumba for comfort, ndakaziva kwakuenda nyaya ndiakatsika tsika asi handina kuramba totally. Manje akafunga kuti there is hope akaramba achingoedza zuva rega rega, asi ndaingoramba pandazoona zvanyanya ndamuudza kuti I would tell Sidell but she was so desparate for my big black cock, but I couldn’t have it Zvanyanaya ndazoudza Sidell vakatukana and Tracy was moved to another shift. Ari ikoko ndipo pakatenderera nyaya yenyoka yangu asi ini kana kumboziva. Shungu dzaTracy dzakaita kuti afonere vabereki va Sidell nyaya ikanetsa kusvika ndazoti I will move out kusviks temperature yadzika. Takawirirana then pandakaudza Anna kuti ndiri kutsaga imba akabva ati aiva ne 3 bedroom house asi iye nemwanasikana wake vaishandisa only 2 bedrooms, ndakaudza Sidell akafara nazvo nokuti tose tairespecter Anna sa senior care plus she was older and mature.
Takagara hedu zvakanaka aas ndichimbonoona Sidell iye achimbouya, nyaya yakanga iri imweyo yekusvirana basi, Sidell akazonditengera mota kuitira kufamba easy pakunomuona kana kumudzosera, iye akanga asina chitamba. Mumwe musi ndakafizuka zvangu ndabva kubasa makuseni ndakneta, the night had been very busy, I actually fell asleep before I could hit the pillow. Ndamuka masikati ndapreswa neweti, ini kana kumbofunga kuti kuneyi ndiye pindikiti mutoilet, wanike Anna achangopedza kugeza ari musvo zvake. Ndakapenyerwa nematako ake, utsvuku, kuumbika kwemuviri, ndobva pfungwa dzamboti tizei. Ndakamba ndaziva kuti kunaka kwese kwaShingi kwaiva kwabva kuna mai vacho. Mazamu kuita kunge asina kumbomwiwa asina kukura seaSidell, asi mhata heyi, aiva nadzo wena, apa akagusa choya chese. Matinji aiita kuoneka nekumberi, ndiri mubishi rekuyeva mudhara akanga atomira zvake,apa ndakapheka kashort chete, ndobva kangonditengesa. “Ko kuzoita kunge waona zvinotyisa kwakanaka” akabvunza Anna ini kwakungoti ,
“ahh sorry tete handina kuziva kuti mune munhu ndanga ndichida kuita weti” akabva abuda ini kuti ndiite weti ingabude, mudhara akuita hake manyemwe. Pave paye ndazoita weti but zvekuita kunge ndichazvimamira nekutsinda. Ndakadzokera muroom mangu ndichangoti garei pamubhedha ndikanzwa dor kuvhurwa, zvikanzi na Anna, “wandionerera saka kuti zviite fair ndokuonererawo,” ndakamboda kuramaba ramba but shondo yaifungawo zvayo.
Ndakabvisa kashort kusara ndine pant, akadzungudza musoro zvichinzi,”ini ndanga ndisina kana chii zvangu saka kurura zvose,” Well what could I have done, ivo mudhara washatirwa big time, ndabvisa ndobva mudhara vaita zvekusvetuka chaizvo, ndakaona Anna kunyemwerea zvikanzi, “saka Tracy aitaurara chokwadi, no wonder why Sidell haachagoni newe,”
“kutaura chokwadi kuti chii” ndakabvunza ndabata mudhara,
“kuti une mboro hombe a black one very black”
Pandakada kuti nditaure ndobva yanzi dzvi, muromo nde pane wangu, mai vaitsvodaivavo kuita kunge vane zviwitsi mukanwa, apa vaine malips mahombe. Pakadaro ungaite naro futi, ndatanga ktsvoda nekubata mazamu, nemakagaro, ruoko mugongo, ndikanzwa maiwe, idinji here iroro, ndaripuruzira ndikanzwa mheche yonyorova. Ndakamusaidzira paubhedha ndotanga kuyamwa nyini, mukadzi mukuru kwakutorova chikapa ini bvandaita nyemwewo, Anna akazamura zviye zvekunakirwa, ndiakramwa ndichiyamwa, kutora kwemheche handina kuziva kuti kwaiva kutunda here kana aive mate angu chete, ari mukati mekuzipirwa ndakanzwa zvonzi ndiise kani munhu achivhura makumbo. Ndakanyatsomugadzirsa pamubhedha ndobva ndati shwe mbijana ndakaona mukadzi oduduza, ini shwe zvekare ndikanzwa yabatwa, zvikanzi imomira. Akambva anyatsovhura makumbo mheche yese ikaenda pachena ini ndodhonza matinji kwakunangisa mudhara pambutu. Musoro pfe ndikanzwa kupisa kwaiita beche nekutsvedzerera, ndakati pindindei ndikaita kunge ndadzonzwa, kuti nyu kudai ndikanzwa bhuuu, yes ndinonzi Samutoko ini. Ndapita about 3quarters akatanga kuita chikapa, iniwo ndichikoira, ndobva atanga kuzuzuma, ini kwakusimudzira mazitako ake ndiye yose nyu, mai vakabowa, “yuwi kani wandibaya, yuwi kani wandiuraya, mhai kani ndofa ini, ……..” nezvimwe zvandisinakunzwa. Akatanga kutunda ini bva ndambomira kukoira, ndaiburitsa ndikaona munhu kuitevera mudenga imomo, ndobva ndanzvengesa. Akabva aitai dzvi zvekare ndikamuti ndoda kuuya neshure. Akandipra mhata dzos idzi ini kwakunyashwetedzera mumwena weuchi, ndati koi koi, iye akatangawo mashiripit ake, “ukuda kuti ndipenge here,” ndakadhinga nyini kusvika muakdzi ozuzuma ndatoona mvura yake yobuda, akabva awira pamubhedha ini ndichteverawo. Irimo kudaro ndaksimudzwa nemahgaro aya chikarohwa chikapa ndirimo mudenga, ndkabva ndonzwa zvouya manje, ini maoko pamazamu, rurimi panze, mukadzi akaridza imwe mhere tikabva tatundirana. “aha wakaoma heyi ndanaga ndisingazive kuti ndakagara neshuga mumba'” akadaro Anna achitendeuka kuti titarisane. Takazotaura hedu tumwe tunyaya tusina basa. Kubva musi uyu takange tokwirana in all sort of positions nguva ip neip zavayo. Some times Anna aitikavhira kubasa tichiita nyaya yedu naSidell, mumwe musi tapotsa tabatwa tiri mutoilet yevakaremara.
Izvi zvakaitika kwenguva and Anna ndakazomudzidzisawo kuyamwa shondo. Rimwe zuva takafunga kuti Shingi aenda kuCollege kwake, saka takatanga nyaya yedu, apa Anna aitndiyamwa zvangu ndakarara akapira gotsi kudoor ini ndokuna Shingi akatitarisa, iye kana kumbovhunduka hake. Ndakanyemwerera ndakamutarisa asi handina kuratidza mai vake, akambomira ndobva anyahwaira achidzika downstairs. Zuva iri ndakarova nyini ndaane dzimwe pfungwa, dzekuda kukwira Shingi, saka ndaipota ndichirova magaro aAnna kuti awezere mhere kuti mwana anyatsonzwa.
Kunaka kwaShingi kwainwisa mvura, manje neganda rake raibvuma mvura aibva aita kunge mukedha zvake. Apa aiva akavakwa samai vake asi iye achiti kana osekerera oita tumakomba mumatama. Zamu raioneka kuti twi riri mublouse kuratidza kuti harisati ramotambwa naro………
by DrSviro · Published November 24, 2014
by DrSviro · Published March 20, 2015
Next story Kusvira vakadzi ku UK part 3
Previous story Kusvira vakadzi ku UK part one